Soomaaliya oo muujisay inay ka xun yihiin eedeyn Soomaaliland u jeedisay madaxweynaha (Dhegeyso) – Radio Daljir
Soomaaliya oo muujisay inay ka xun yihiin eedeyn Soomaaliland u jeedisay madaxweynaha (Dhegeyso)
Nofeembar 21, 2013 1:32 b 0
Muqdisho, November 21, 2013 – Wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa ka hadashay hadal ka soo yeeray maamulka Soomaaliland, kaas oo sheegayey in madaxweyne xasan sheikh Maxamuud uu caqabad ku yahay ammaanka iyo horusocodka Soomaaliland.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed oo shir jaraa?id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ay ka xun yihiin hadalka ka soo yeeray Soomaaliland, isagoo tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka go?an tahay midnimada iyo xasiloonida dalka oo dhan.
?Madaxweynaha waajibka qaran ee saaran ayaa ah isu soo dhowaynta iyo xasilinta dalka Soomaaliya, waan ka xunnahay eedeynta aan salka lahayn ee dowladda Soomaaliya loo jeediyey.? Ayuu yiri Guuleed.
Mudane Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay boggaadinayso maamulada Soomaaliland iyo Puntland ee horumarka balaaran ka gaaray xasiloonida iyo kala dambaynta nidaamka dowladnimo, isagoo intaas ku daray in hadalka ka soo yeeray Soomaaliland uusan haboonayn.
?dhowr wareeg oo wada-hadalo ah ayaa dhexmaray dowladda federaalka ah iyo Soomaaliland, warkan ka soo baxay Soomaaliland caqabad ayuu ku noqon karaa heshiiska.? Ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Wasiirka ayaa ugu dambayntii madaxda Soomaaliland ugu baaqay in ka waantoobaan hadallada kala fogaanta keeni kara, waxaa uu hadalkiisa ku daray in la xoojiyo heshiiskii dowladda iyo Soomaaliland ee horudhaca ahaa.
Dhegeyso: Shir jaraa?id oo uu Muqdisho ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Guuleed
QM oo si hoose ula soconaysa habka ay u dhacayso doorashada dhow ee Puntland (Dhegeyso)